07|01|28 – Fivavahana hoan’i Madagasikara [tanàna maro] | i am a malagasy in genève
07|01|28 – Fivavahana fanentanana hoan’i Madagasikara [Lausanne, CH]
Ilay mpanonofy | Martin Luther King Jr.
07|01|28 – Fivavahana hoan’i Madagasikara [tanàna maro]	Par : tomavana
Jan 21 Catégorie: fanohanana, fivavahana
Pastora Helivao Ramavoarimanga-Poget talen’ny Fifam otronin’ny ankizy, sary nadika tamin’ny l’appel.org
Misy fivavahana maro hampahalalana an’i Madagasikara, anasana antsika Malagasy, hatao ny Alahady 28 Janoary 2007 amin’ireto tanàna manaraka ireto:
– any Montreux [VD] amin’ny 10:00 ora maraina. I Didier Curty, dia hizara ny traik’efany taorian’ny herintaona nampianarany Matematika sy Fizika tany amin’ny sekoly FJKM tany Madagasikara,
– any Oron-la-Ville [VD] amin’ny 10:00 ora maraina. Ny iraka Madeleine Roulet dia hanao tatitry ny diany tany Madagasikara. Hisy « duplex » hifandraisana mivantana amin’ny Pastora Rtoa Helivao Ramavoarimanga-Poget tompon’andraikitry ny toby Fifam [Fifampandrosoana], any Antananarivo, Madagasikara.
– any Cugy [VD] amin’ny 10:15 ora maraina. Fivavahana mifantoka amin’i Madagasikara miaraka amin’i Jean-François sy Claudine Reber.
– any Rolle [VD] amin’ny 10:15 ora maraina. Fitsofan-drano an’i dokotera Rtoa Véronique Garin izay handeha hiasa 3 volana anivon’ny « fampianarana ho amin’ny fahasalamana » [éducation à la santé] any amin’ny toby Fifam [Fifampandrosoana], any Antananarivo, Madagasikara.
Ireo fanentanana ireo dia atao hampahalalàna sy hamatsiana ireo tetik’asa tohanan’ny DM-échange et mission any Madagasikara.
[Fifam – gazetim-piangonana Argovie, Jona 2006 pdf >>]
[lohahevitra sahala >>]